लुजडाउन कसरी गर्ने र उपत्यकामा यसको मोडालिटी कस्तो हुनेछ ? | Khabar Sadan खबर सदन
Home समाचार लुजडाउन कसरी गर्ने र उपत्यकामा यसको मोडालिटी कस्तो हुनेछ ?
लुजडाउन कसरी गर्ने र उपत्यकामा यसको मोडालिटी कस्तो हुनेछ ?
– वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा बिस्तारै हटाउने सरकारको योजना छ । कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर ओरोलो लागेसँगै गृह मन्त्रालयले निषेधाज्ञा हटाउने विषयमा कदम चाल्न थालेको हो ।
२०७६ चैत ११ गतेदेखि देशभर लगाइएको लकडाउन २०७७ साउन ७ गते खोलिएको थियो । १२० दिन जारी रहेको लकडाउन सरकारले देशभर नै एकैपटक खोलेको थियो । तर यसपाली भने चरणबद्ध रूपमा खोल्दै जाने सरकारको योजना छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले विगतको गल्तीबाट पाठ सिक्दै यो पटक निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै जाने गृहकार्यमा रहेको बताए ।
अहिले मुलुकभर गरिएको निषेधाज्ञा आदेश कार्यान्वयन र संक्रमणको अवस्थाबारे समीक्षा भइरहेको र त्यसको आधारमा असारदेखि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको निर्क्यौल हुने उनको भनाइ छ ।
प्रवक्ता दाहालका अनुसार अहिलेको निषेधाज्ञामा केही सहज गरेर जनजीवन सहज बनाउँदै जाने योजना रहेको छ ।
हुन त प्रत्येक जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्ने तथा हटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । सोही आधारमा प्रजिअहरूसँग आवश्यक समन्वय तथा गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो लहरमा लकडाउन एक्कासि खोल्दा संक्रमण बढेको भन्दै यसपाली भने त्यस्तो गल्ती नहुने बताए । ‘यो पटक हामी बिस्तारै खुकुलो पार्दै जान्छौँ । अब निषेधाज्ञा होइन, लुजडाउनमा जान्छौँ’, उनले भने, ‘यो अवधिमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, सिनेमा हल, डान्सबार लगायत मानिसको बढी भीडभाड हुने क्षेत्र खुल्दैनन् ।’
गत वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा २०० र तराई तथा सहरी क्षेत्रका जिल्लामा ५०० भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । देशभर नै संक्रमणदर ओरालोतिर लागेको छ भने निको हुने दर बढेको छ ।
अहिलेसम्म ७२ जिल्लामा पूर्ण रूपमा (जिल्लाभर) निषेधाज्ञा, ३ जिल्लामा आंशिक (केही भू-भागमा) निषेधाज्ञा जारी छ ।
लुजडाउन भएको खण्डमा जिल्लाभित्र आन्तरिक सहजता प्रदान गरिने तर, स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने मापदण्ड बन्न सक्छ । कृषि व्यवसायलाई केही सहज हुने गरी लुजडाउन गर्न सकिने भन्दै प्रवक्ता दाहालले अहिले नै केही टुंगोमा नपुगिएको बताए ।
लुजडाउनमा सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लव, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, शपिङ मल, मनोरञ्जनस्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, हेल्थ क्लव, फुटसल, जिमखाना, समूहमा खेलिने खेलकूद, पुस्तकालय, सङ्ग्राहालय, चिडियाखाना, दर्शकसहितको खेलकुदका गतिविधि भने बन्द रहनेछन् ।
दैनिक जनजीवनसँग जोडिने कुरालाई भने सहज पार्दै जाने उनको भनाइ छ । मल बीउ, कृषिकर्म, अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, सामग्री ओसारपसार र विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने प्रवक्ता दाहालले जाकारी दिए । त्यसका लागि भने पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु पर्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाको मोडालिटीः
काठमाडौं उपत्यकामा पनि संक्रमणदर घट्दै गएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नेबारे तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् । उपत्यकामा ३१ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ ।
असार लागेपछि भने केही सहज हुने गरी निषेधाज्ञा खुकुलो पार्न सकिने विषयमा छलफल भइरहेको काठमाडौंमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए । अब उपत्यकामा सवारीको हकमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्न सकिनेछ । तर, सार्वजनिक सवारी भने तत्काल खुल्ने सम्भावना एकदमै कम छ ।
अहिले नै कस्तो खालको मोडालिटी हुने भन्ने टुंगोमा नपुगेको उनले बताए । तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच छलफल गरेर मात्र मोडालिटीको विषयमा टुंगोमा पुगिने प्रजिअ पराजुलीले जानकारी दिए ।
प्रजिअ पराजुलीका अनुसार काठमाडौंमा निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि बाहिरबाट आवतजावतमा भने अझै कडाइ नै गर्ने मनसाय प्रशासनको छ । त्यसका लागि उपत्यकाका सीमा नाकामा थप कडाइ गर्ने, बाहिर जिल्लाबाट आउनेलाई रोक लगाउने जस्ता मोडालिटी हुन सक्नेछ ।
Previous articleनेप्से दोहोरो अंकले घट्यो यसरी
Next articleविश्वको सर्वश्रेष्ठ चित्रहरु,जुन तपाईं हेर्दै दङ्ग पर्नुहुनेछ